Tahotra sy tsy fahatokisan-tena izao… | NewsMada
Tahotra sy tsy fahatokisan-tena izao…
Par Taratra sur 08/01/2018
Lany henatra? Na efa tsy mahita atao, na hevi-baovao, na holazaina… Tsy ny vahoaka loatra no mahamaika ny governementa amin’izao taom-pifidianana izao, fa ny fanohanana ny filoha hirotsa-kofidina: « kandidàm-panjakana »? Amin’izany, roa no lazaina ho fahavalo. Eo ny fahavalo ao anaty fitondrana: mpamosavy malemy ka ny ao an-trano ihany no aripaka? Na tsinay homana aty…
Mazava be koa amin’izany fa ny seza na toerana na fahefana no tena zava-dehibe sy mahamaika ny mpitondra: olom-pahefana fa tsy olom-panjakana? Fitantanana fahefana no mibahan-toerana, fa tsy fitondrana fanjakana. Atao izay hitanana sy hanamafisana fahefana, dia izay… Izany ny mahatonga ny fivarotan-tanindrazana, fanjakazakan’ny vahiny, tsy firaharahana vahoaka… ?
Fahavalo faharoa, hono, ny fahantrana. Ndeha atao hoe fahantram-bahoaka io, na hita ho mihabe hatoka sy takolaka andro aman’alina avokoa aza ireo mpitondra ambony amin’izao: malai-mihetsika. Hafa ny an’ny vahiny amin’ny teny mandroso, ohatra: mahia sy miady saina noho ny fiantsorahana adidy sy andraikitra amin’ny fampandrosoana. Ndrao tsy vita tsinona izay nampanantenaina ny vahoaka.
Tena atrehin’ny mpitondra ve izay fahantram-bahoaka izay? Na izay politikam-panjakana aza tsy hita mazava: ny foto-kevitra, ny fandaharanasa, ny tetiandro amin’izay atao, ny vola enti-manana, ny sehatra anaovana ny asa… Fisehosehoana sy fisekosekoana no be hoe mihetsika sy manao: fizarana fanampiana kely, famangiana mahantra… Tsy misy fanalana azy ao anatin’ny fahavoazany amin’izany.
Lany henatra? Na efa tsy mahita atao, na hevi-baovao, na holazaina… Hiady amin’ny fahavalo. Ny fositra mikiky ny toerana sy ny fahantram-bahoaka izany, mba hampandresena ny « kandidàm-panjakana »? Taom-pifidianana izao, ary mifototra amin’izany izao izay atao… Aza gaga, manomboka miseho amin’ny tena endriny sy heviny ny tsirairay. Tahotra sy tsy fahatokisan-tena? Noho ny atao fa tsy inona…